Adeegga Habka Degdegga ah - Anebon Birta Products Co., Ltd.
Anebon ma bixiso oo keliya adeegyo habeysan oo loogu talagalay soo-saarka mugga hooseeya ee wax soo saarka, Iyadoo la tixgelinayo naqshadda warshadaha hal-abuurka leh, laakiin sidoo kale waxay bixisaa adeegyo farsameyn dhakhso leh. Haddii aad leedahay mashruucyo cusub oo hoos imanaya, waxaan ku siin karnaa tixraacyo xul ah, hababka mashiinka iyo daweynta dusha sare. Iyo talooyin kale, Ka dhig naqshadeyntaada mid wax ku ool ah, adigoo ka warqabaya hal-abuurkaaga dhaqaale iyo deg deg.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Soosaarka Degdegga ah uu ka duwan yahay noocyada hore, taas oo u baahan baahi heer sare ah oo xagga dareenka ah, soo noqnoqosho ah, iyo shuruudaha adag ee codsiyada wax soo saarka ah. Marka la eego Anebon waa mid ka mid ah kuwa ku yar warshadaha oo ah soo saare dhaqso badan oo run ah.
Waxaan ku takhasusay soo-saarka tayo sare leh, noocyo qiimo jaban ah. Iyada oo leh teknoolojiyad iyo adeegyo kala duwan, waxaan nahay dukaanka hal-ku-habboon ee loogu talagalay dhammaan baahiyahaaga horudhaca ah.
Noocyada noocyadu waa kuwo aad waxtar ugu leh hagaajinta naqshadeynta, inbadan oo ka mid ah macaamiisheenna waxay u baahan yihiin inay si dhakhso leh u soo saaraan qaybo jireed si ay u ansixiyaan naqshadaha ama ay u helaan fursado iibsi muddo-gaaban ah.
Maaddaama qaybo badan oo laga soo saaray dukaamada noocyadoodu maalmahan u baahan yihiin mishiinno shan-geesood ah, 5-dhidibka dhidibbada iyo adeegyada makiinadaha ay aad ugu baahan yihiin codsiyo kala duwan oo warshado kala duwan leh oo ay ka mid yihiin warshadaha aerospace, warshadaha uumiyaha, warshadaha baabuurta soo celiya iyo sidoo kale tamarta warshadaha wax soo saarka. Faa'iidooyinka makiinadaha waxaa ka mid ah dhameystirka dusha sare ee tayada sare leh, saxnaanta booska, iyo waqtiga hogaaminta gaaban iyadoo la abuurayo gees aad u weyn fursadaha ganacsi ee cusub.
Maxaad ugu dooratay Anebon qaab-dhismeedka degdegga ah?
Bixinta Degdeg ah: Nooca degdega ah ee 1-7 maalmood ee bixinta caalamiga ah, soosaarida waxsoosaarka hooseeya 3-15 maalmood gaarsiinta caalamiga ah;
Talooyin macquul ah: Kuu soo bandhigaan talo bixinno macquul ah oo dhaqaale adiga kugu saabsan qalabka, farsamooyinka farsamaynta, iyo daaweynta dusha sare;
Golaha Bilaashka ah: Mashruuc kasta waa la tijaabiyaa lana kulmaa ka hor intaan la keenin si loogu oggolaado macaamiisha inay si fudud isugu soo baxaan oo ay uga fogaadaan waqtiga luminta ay sababtay dib-u-shaqaynta
Nidaamka Cusbooneysiinta: Waxaan haynaa shaqaale 1 ilaa 1 shaqaale iibin ah si aan u cusbooneysiino horumarka isla markaana aan ula xiriirno arrimaha la xiriira khadka tooska ah.
Adeegga Iibinta Kadib: Macaamiisha waxay ka helaan jawaab celin badeecada waxaanan ku siineynaa xalal 8 saacadood gudahood.